Zimbabwean Govt Defiant on Diaspora Vote - allAfrica.com
Zimbabwean Govt Defiant on Diaspora Vote
The government remians silent on the diaspora vote case despite an order from the African Commission on Human and People's Rights to allow exiles to participate in the country's elections.
Zimbabwe: Constitutional Court Delays Diaspora Vote Case, As Govt Remains Defiant
The government of Zimbabwe has been slammed for its continued silence over the Diaspora vote, in defiance of the continent's top human rights court. Read more »
Zimbabweans lining up at a polling station (file photo).
SW Radio, 12 March 2013
The African Commission on Human and People's Rights has ordered the Zimbabwe government to make provisions to allow Zimbabweans abroad to vote in Saturday's referendum. Read more »
Zimbabwe: Zim Govt Still to Respond to Diaspora Vote Court Order
SW Radio, 3 April 2013
There has still been no formal response from the Zimbabwe government to an order by the continent's highest court, which ruled that Zimbabweans in the Diaspora be granted voting… Read more »
OSISA, 12 March 2013
It is a decision that could potentially change the electoral game in Zimbabwe. Read more »
Zimbabwe: Diasporans Unexcited About Polls
Financial Gazette, 28 February 2013
ZIMBABWEANS based outside the country are unlikely to flock back home en-mass to participate in the referendum vote and in general elections set for later this year. With so-called… Read more »
Zimbabwe: Diaspora Protests to 'Intensify' Ahead of Zim Poll
The heads of a global protest movement that has been campaigning for real reforms in Zimbabwe for over a year has vowed to 'intensify' their protest action, before elections… Read more »
Zimbabwe: Diaspora Vote Put Aside By Government
SW Radio, 17 September 2012
A "unanimous" decision by the parties in government has been made which puts aside the voting rights of Zimbabweans in the Diaspora, allegedly over concern that a postal vote could… Read more »
SW Radio, 13 July 2012
The right of Zimbabwe's scattered Diaspora to vote in the coming elections has not been secured in the Electoral Bill, as part of what SW Radio Africa has been told is a 'horse… Read more »
SW Radio, 12 July 2012
The MDC-T has said they are prepared to take Justice Minister Patrick Chinamasa head-on if he tries to push through the Electoral Bill that precludes the Diaspora vote. Read more »
Zimbabwe: Politics Hinder Diasporas' Right to Vote
WHILE the current Constitution gives every adult citizen of Zimbabwe the right to vote in elections and referendums, the enactment of supporting legislation to guarantee that all… Read more »
Obstacles Block Mugabe's Way to Zimbabwe Elections
Sickness, pressure from neighbours and fissures in his Zanu PF party seem to have conspired to slow down President Robert Mugabe's push for elections later this year. Read more »
Zimbabwe: Obstacles Block Mugabe's Way to Elections